Endritsoratra calligraphy 25 | Famoronana an-tserasera
Endritsoratra calligraphy 25
Carlos Sanchez | | loharanom-baovao, General, dia midika hoe
Ny endritsoratra nosoratana tanana dia loharano tena mety amin'ny tetikasa sary maro. Na izany aza, manana drawbacks koa izy ireo izay mahatonga azy ireo tsy dia atolotra araka ny tranga sy toe-javatra inona. Mpanamboatra sary maro no manapa-kevitra ny tsy hiraharaha azy ireo matetika noho ny tahotra sao hahatonga azy ireo ho sarotra ny mampita ny hafany. Tsy hoe tsy misy antony izy ireo, ary matetika ireo karazana endritsoratra ireo dia manome amin'ny fomba miharihary, olana maro amin'ny resaka famakiana. Na dia marina aza fa tsy izy rehetra no miteraka io olana io, na farafaharatsiny mba tsy hitovizany amin'ny maridrefy iray, dia mety foana raha ezahintsika mitandrema rehefa mampiasa azy ireo amin'ny volavolainay. Raha eto ianao dia satria mandinika ny mety hampiasa azy ireo amin'ny tetikasa iray ianao. Manomboka eto dia mamporisika anao hidina hiasa aho, na dia zava-dehibe aza ny fanananao zavatra ao an-tsaina alohan'ny handehananao miasa.
Androany dia manolotra fonosana fontsoratra an-tanana tena ilaina sy torolàlana kely izahay hanatsarana sy hanaovana ny ankamaroany. Satria azo antoka fa azo ampiasaina izy ireo nefa tsy manelingelina ny fampitana vaovao ary afaka manome lanja fanampiny ny volavolainay sy ny foto-kevitray. Andao hanomboka amin'ny voalohany!
1 Ny olan'ny famakiana mora
2 Ny italiana dia tsy mitovy dika amin'ny tanana
3 Fifandraisana amin'ny marika momba ny mpiasa
4 Endritsoratra tanana ary fanamafisana ny famoronana
5 Sora-tanana nosoratana ho singa haingon-trano
6 Torohevitra manan-danja
Ny olan'ny famakiana mora
Raha misy karazana mampiavaka ireo karazana loharano ireo dia satria izy ireo somary sarotra kokoa noho ny loharanom-baovao sisa. Mahatonga olana vitsivitsy izany satria mila fifantohana sy fifantohana bebe kokoa izy ireo hamakiana tsara ny atiny. Ny litera sasany dia manjary misavoritaka amin'ny hafa ary io karazana olana io dia mahatonga ny mpamaky tsy liana amin'ilay hafatra intsony ary noho izany dia mihena ny hakanton'ireo volavolantsika. Ireo no antony lehibe mahatonga ireo karazan-endritsoratra ampiasaina matetika sy tsy dia misy eo amin'ny fiaraha-monina mpamorona. Izany no antony nanesorana azy ireo tamin'ny fomba sasany ho amin'ny fiaramanidina haingon-trano fotsiny sy amin'ny fomba mihena be amin'ny fitambarana. Na izany aza, tsy maintsy mazava amintsika ny anjara toerany amin'ireo tranga ireo. Rehefa ampiasaina ho famenon-haingo ny endritsoratra tanana, dia manohana ny hafatra sy ny hevitra ao ambadik'ireo volavolanay ihany koa izy io, raha ny marina dia manana tanjona roa sosona izy: Haingo ary amin'ny lafiny hafa mifampiresaka. Zava-dehibe fa raha manapa-kevitra ny hampiasa ireo karazana loharanom-pahalalana ireo ianao, dia tsy ho hadinonao ny fahamaotinana. Tokony hianatra hametaka ny fampiasana azy isika ary rehefa mampiasa azy dia tokony hazava fa ny endritsika dia tsy maintsy mifanaraka tanteraka amin'ny hafatra tian'ilay endrika hampitaina. Izany dia ataontsika mba tsy hialana amin'ny olana sasany amin'ny famakiana sy ny fahaiza-miteny, fa mba hananan'ny endri-tsoratra an-tanana fahefana na fahaizany misarika ny mpamaky hisarika ny sain'izy ireo. Ataovy ao an-tsaina fa raha mampiasa ireo karazan-endritsoratra ireo mandritra ny famolavolana anao ianao, dia ho very ny herin'ny tànana voasoratra an-tanana avy amin'ny antonony. Raha vantany vao miseho amin'ny tsirairay amin'ireo teny mandrafitra ny firafitra izy ireo, dia tsy hanana hery na fintana amin'ny mpamaky izy ireo. Na izany na tsy izany dia tsy ho afaka hanaitra ny sain'ny mpampiasa izy ireo.
Ny italiana dia tsy mitovy dika amin'ny tanana
Toy ny angano iray, ny hevitry ny endritsoratra soratana tanana dia mifamatotra ara-tsaina hatrany amin'ny sora-mandry. Tsy mahagaga raha nitranga izany, tsy maintsy tadidintsika fa maro ny endritsoratra nosoratana tanana izay miaraka amina vanim-potoana fanaovana sora-mandry. Na izany aza, tsy endri-javatra voajanahary amin'ny foto-kevitry ny sora-tanana izany. Tsy ny endritsoratra tanan'ny tanana rehetra aza dia manafintohina, na akaiky aza. Ny endrika mampiavaka an'ity karazana endri-tsoratra ity, araka ny tondroin'ny anarany dia toa izy io tanana. Tsy ny litera rehetra izay vita tanana no ozona, sa tsy izany? Tonga ny fotoana hianaranao hanavahana ny hevitra roa. Raha ny tena izy, ny endritsoratra amin'ny sora-tanana dia mety hanana endrika sy fisehoana isan-karazany, noho izany dia betsaka kokoa ny safidy noho ny mampiasa sora-mandry. Tsy maintsy manao ezaka ianao hisafidianana ilay mety indrindra. Fakafakao ny loharano lehibe iray ary miezaha hamantatra ireo izay mitovy fironana amin'ny orinasanao. Fa azafady, aza ferana ny fisafidianana endritsoratra izay ny mampiavaka azy dia ny manao sora-mandry. Mikaroha sy diniho ny azo atao sy ny karazany bebe kokoa no tsara kokoa. Rehefa mitodika any amin'ireo karazana loharano ireo isika, dia satria mila mampihatra "olombelona" kely amin'ny lahatenintsika ara-maso. Azonao atao ny mahita an'io singa io amin'ny fomba hafa. Ohatra, ny endritsoratra iray izay azo antoka fa tsy dia mazava loatra dia mety miasa tsara amin'ny tetikasanao. Ny famoronana anao dia mety mila fatra mikorontana amin'ny alàlan'ny loharanom-pahalalana nampiasana ary noho izany dia manome akaiky kokoa ny fitenenana, ny maha-olona ary ny fahatsorana izany. Maro amin'ireo endritsoratra naroso ao anaty katalaogin'ny sora-mandry no tsy mitovy amin'ny karazana fitaovana nitaona azy ireo: pensilihazo, penina, marika ... Ny fandinihana an'io endri-javatra io mba hampiharana azy ireo amin'ny tetikasanao dia mety hahaliana ihany koa. Arakaraka ny ahitanao azy no mampitombo ny fahalalanao momba azy ireo ary hahita fahasamihafana lehibe kokoa ianao. Nuansa izay toa tsy voamariky akory nefa manisy fiovana lehibe.
Fifandraisana amin'ny marika momba ny mpiasa
Ny endritsoratra nosoratana tanana dia ampiasaina matetika kokoa eo amin'ny tontolon'ny marika manokana na marika manokana. Ny antony dia tena tsotra, ary ireo karazana taratasy ireo dia manome fahatsapana hafanana, fifandraisana akaiky ary akaiky. Azon'izy ireo atao ny manolotra ny toetran'ny olona ao ambadik'ilay logo. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fiheveranao ireo toetra tianao hatsaraina amin'ny dingana fifantenana sy fizahan-toetra. Tokony ho azonao atao ny mamantatra ny tena mampiavaka ny marikao sy hahita azy ireo ao amina endritsoratra ampiasaina. Izany dia mitaky fahatsapana sasany saingy tena mandaitra tokoa. Misy teboka iray izay tsy maintsy tadidinao, ary izany no izy tokony hialanao ny fampiasana font sora-tanana toy izao. Ny fampiasana endritsoratra nalaina mivantana avy amin'ny banky dia tsy matihanina ary mandeha ho azy loatra koa. Zava-dehibe ny ianaranao mametraka kely ny toetranao sy ny fahaizanao mamorona ao. Hanova azy, mamolavola ny fombanao manokana miorina amin'ny typeface izay iasanao. Tokony hialanao kely izy io, satria raha tsy mifanaraka amin'ny azy ianao dia mety hiverina any amin'ny tsy fahampian'ny famakiana. Raha manararaotra maka typographer ianao, dia mety ho tsara kokoa ny endritsoratra manokana, na dia tsy ny olona rehetra aza no afaka manao izany. Indrindra rehefa miatrika ny dingana voalohany amin'ny fampandrosoana orinasa na marika isika. Raha mazoto amin'ny tontolon'ny Typography azonao atao ny mamolavola ny endritsoratra manokana arakaraka ny filan'ny marikao. Teo aloha dia tsy maintsy manao famolavolana hevitra matanjaka ianao ary mazava ho azy diniho ireo endritsoratra maro izay manintona anao. Azonao atao koa ny mampiasa ny calligraphy anao. Penina sy taratasy fotsiny no ilainao, soraty ny teny tianao hisolo tena ny orinasanao ary skaneo io. Afaka manomboka miasa nomerika amin'ity sary ity ianao avy eo miaraka amin'ny programa famolavolana typeface manokana.
Endritsoratra tanana ary fanamafisana ny famoronana
Misy paikady sy teknika isan-karazany ahafahana manome dinamika amin'ny endrika accents na fanamafisana amin'ny famoronana. Anisan'ireo paikady hitantsika ny loko. Amin'ny maha axis azy dia ampiasainay ny loko orinasa ary manao fanovana amin'ny feo amin'ny faritra sasany izahay, ka amin'ity fomba ity no hisian'ny asynchrony iray ary ny hafatra dia mahazo tanjaka sy tanjaka. Ny iray amin'ireo paikady ireo dia mifototra amin'ny habe. Ho ampy ny manova ny haben'ny singa iray izay ampahany amin'ny firafitra, amin'ity fomba ity dia hotapahintsika ny gadona. Fa kosa, hamorona gadona isika amin'ny fiatoana miaraka amin'ny firindrana izay mampifanaraka tanteraka ny zava-misy. Araka ny hitanao, ny fitsipika fototry ny hetsika rehetra ireo dia mitovy: Makà saina ary manangana ambaratongam-pisainana mifototra amin'ny hevitra sy sary izay manampy ny mpamaky hampifantoka ny sain'izy ireo amin'ny singa sasany. Amin'ity paikady kendrena ity dia ho mora kokoa amintsika «tahony»Ny vaovao, milalao miaraka aminy ary manangana kabary mahery vaika sy mandresy lahatra kokoa. Ny tena tanjon'ny lahateny hita maso dia ny mijanona ao anaty fitadidian'ny mpijery. Amin'izany fomba izany no hanaovantsika antoka fa hamorona fifandraisana aminy ary noho izany dia hamaly ny marika misy antsika. Tsy an-kanavaka ny typography ary noho izany dia tsy afa-miala amin'ity paikady ity. Afaka mampiasa karazana endritsoratra samihafa isika mba hanomezana fiatraikany amin'ny fahitana ny mpijery, na indraindray dia ampy fotsiny ny mampiasa ny endriny mitovy amin'ny fomba isan-karazany (sahisahy, italiana ...). Na dia maro aza ny mpamorona manapa-kevitra ny hanalavitra an'ity teknika ity dia tena soso-kevitra tokoa. Na dia marina aza fa tena ilaina ny fananana tsiro sy fahatsapana manokana hanakambanana loharano roa samy hafa. Na izany na tsy izany, tsy tsara ny fanararaotana ity teknika ity koa avy amin'ny endritsoratra. Soso-kevitra ny hampiasa fonosana telo samy hafa farafahakeliny amin'ny endrika iray. Mety mila fanao vitsivitsy ianao hanombohana mahafehy ity paikady ity. Manomboka eto dia manasa anao aho hanandrana azy ary hampihatra izany.
Sora-tanana nosoratana ho singa haingon-trano
Ny iray amin'ireo endrika mahavariana indrindra amin'ity karazana endri-tsoratra ity dia ny fihodinan'ny tsipika, ny tsy fanarahan-dalàna ny habetsany ary mazava ho azy ny fisian'ny endrika boribory sy kanto hatrany. Noho ireo antony ireo dia mety ho tonga lafatra ny endritsoratra an-tànana amin'ny famolavolana sy fivoarana avy aminy, singa haingon-trano izay mameno sary famantarana na firafitra. Na dia tsy dia fahita firy aza izy io dia mety ho lasa paikady izay manome freshness, joviality ary fahamendrehana amin'ny famoronana.
Aza mampiasa azy ireo amin'ny lahatsoratra be dia be: Ny litera sora-tanana dia mora afangaro sy mitambatra, noho izany ilaina ny manalavitra antsika voalohany amin'ny fampiasana azy amin'ny lahatsoratra be dia be. Tokony hiezaka ny hampihena ny fampiasana azy amin'ny tranga tsy manam-paharoa na amin'ny faritra mampihena ny lahatsoratra isika. Raha tsy izany dia ho very fiantraikany izy ireo ary mety ho lasa lahatsoratra tsy manasa hamaky azy ireo. Amporisihina indrindra isika hizara an'ity karazana endritsoratra ity ho an'ny andian-teny mihena, indraindray ny fanasongadinana ny teny lakile (indraindray na ny litera aza) dia mihoatra ny ampy ary ny vokany dia manaitra, azo vakina ary mahomby kokoa.
Mifanohitra ny sary sy ny soratra: Tokony hianatra hitandrina ny fifanoherana isika. Indrindra ny filalaovana ny feon'ny litera sy ny any ambadika. Ny zavatra tsara indrindra dia ao anatin'ny faritra na vatasarihana soratra misy loko mitovy na farafahakeliny farafaharatsiny. Raha sary no anaovana ny ao ambadika, asaina manandrana mampiditra karazana blur ao aminy isika hanatsarana ny fahazoana mamaky dikanteny. Ataovy ao an-tsaina fa ny sary dia kisendrasendra kokoa ary ny alokalony dia zaraina saika tsy nahy any amin'ireo faritra mifanohitra be sy kely ary koa mitranga amin'ny jiro. Noho izany, tokony hiezaka ny hisafidy tsara izay tonony mety sy jiro ary fiaviana ianao.
Size: Tokony hiezaka ny hanome ny refin'ny sora-tananao izay eo anelanelan'ny habe antonony sy ny lehibe kokoa. Hanamora kokoa ny famakiana izany ho an'ny mpijery ary hiavaka kokoa amin'ny fahitana sy amin'ny fotoana fohy izy io.
Raiso ny stock, mendrika izany ve? : Ny fampidirana ireo endritsoratra tanana dia manana andiam-pamantarana sy mitaky andian-fepetra amin'ny fandaminana sy ny fandaminana ny habaka ary koa ny fampiasana ny loko. Betsaka ny fotoana aorian'ny nahavitanay ny famoronana izay toa tsara dia tsara, nanapa-kevitra izahay fa mety tsara ny mampiditra endri-tsoratra nosoratan-tanana. Ny olana dia amin'ny fampidirana ireo endri-tsoratra mahaliana antsika dia manomboka hitantsika fa tsy dia tsara tarehy na mora vakina araka ny nantenaintsika izany. Avy eo dia manomboka mampihatra ireo paikady voalaza tao amin'ireo teboka teo aloha izahay saingy mahatsapa fa tsy maintsy averina mandamina ny firafitra rehetra. Amin'ireto tranga ireto, mahasoa ve izany? Ambonin'izany rehetra izany dia tsy maintsy misy ifandraisany amin'ny endrika endrika noforoninay. Amin'ireny tranga ireny dia tsy misy ifandraisany mihitsy ny hoe "tianay" ny hatsarany. Raha manalavitra antsika amin'ireo fotokevitra noforoninay izy dia tsy maintsy esorintsika ilay hevitra.
Fandanjana loko, fitambarana: Raha mifanakalo endritsoratra amina endritsoratra hafa isika, dia mila mianatra milalao amin'ny haavon'ny loko ihany koa isika. Azontsika atao ny manisy tsipika an'io fahasamihafana io amin'ny fanovana endritsoratra amin'ny fifanoherana chromatic, ary koa amin'ny fifanoherana amin'ny haavon'ny habe na ny endritsoratra. Raha afaka milalao ny loko orinasa misy ny orinasanay isika na manolo azy ireo hiasa ohatra ny afisy dokam-barotra na mitaona ny teny filamatra, ny vokany no ho mandaitra indrindra.
Raha manana fisalasalana momba ny valiny tadiavinao ianao, dia asaina manandrana mamorona tsipika famoronana samihafa sy fizotra famoronana misy singa samihafa ianao. Mety hahita ratra samihafa ianao manintona anao na ny mpanjifanao raha miasa amin'ny antoko fahatelo ianao. Amin'ireny tranga ireny dia tsy misy tsara noho ny manadihady lalindalina kokoa. Indrindra raha miasa amina sary famantarana na singa iray amin'ny maha-izy azy orinasa iray izahay. Resort any sary momba ny dokam-barotra mety ho fomba tsara io hahazoana ny valiny tadiavintsika. Azontsika ampiharina ihany koa ny volavola tsirairay amin'ireo fanohanana ho avy izay hoentin'izy ireo ary amin'ity fomba ity dia manapa-kevitra mifototra amin'ny asany sy mahita hoe iza amin'ireo vahaolana no azo ampiharina amin'ny tanjona napetraka. Ny logo sarotra kokoa dia misy olana kokoa rehefa apetraka amin'ny faritra kely na refy. Ianao dia mila miantoka fa azo vakina sy mora fantarina.
Ho famaranana dia tsy maintsy tadidinao fa ny typeface nosoratan'ny tanana dia azo aseho ao samy hafa ary ny karazany mba hahafahana mampifanaraka azy amin'ny tetik'asa samy hafa karazana. Ny typografia an-tanana dia ampiasaina matetika kokoa amin'ny tetik'asa famolavolana sary, famolavolana fanovana, famolavolana tranonkala ary tetikasa audiovisual. Rehefa manapa-kevitra momba ireo vahaolana ireo ianao dia tsy maintsy tadidinao fa hisy fepetra na teboka tokony horaisina ka ho azo raisina amin'ny endriny. Manaraka izany dia hizara aminareo kely izahay fifantenana endritsoratra Ny tena manintona sy tsara indrindra amin'ny rehetra dia ny fisian'izy ireo maimaim-poana.
Soso-kevitra ny hanananao banky loharano vitsivitsy ary hampiasa azy ireo tsy tapaka. Ohatra tsara dia ny Squirrel Font, Google Fonts na mitovy amin'izany. Amin'ny ankapobeny, amin'ireo karazana banky ireo dia afaka mahita ireo karazana loharano mora foana ianao satria voasokajy ao anaty menus lehibe.
Ilay Mpanjaka sy Mpanjakavavy
Eutemia I Italiana
Efa nampiasa endri-tsoratra an-tànana ve ianao amin'ny tetikasanao momba ny maso sy ny orinasa? Lazao ahy ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra ary zarao aminay ny asanao raha tianao!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » loharanom-baovao » Endritsoratra calligraphy 25
Tsara aho fa efa reraky ny fikarohana tamin'ity karazana loharanom-baovao ity, misaotra betsaka.
Rodarte dia hoy izy:
tsara, manao fanasana mariazy aho ary tsara izany, misaotra betsaka
Valiny tamin'i Rodarte
Tg dia hoy izy:
Valiny ho an'ny Tg
vanhalex dia hoy izy:
misaotra tamin'ny fifantenana fa, amin'ny teny qualitative, misy vitsivitsy sisa ... Lazaiko aminao ho mpamorona sy tia typografika.
Mamaly an'i vanhalex
Norma dia hoy izy:
Tena tsara !!. Misaotra
Mamaly ny fitondrana